DHAGAYSO:Dacwadii Badda ee Somalia & Kenya oo sharci yaqaano hor leh ay ka hadleen
GAROWE(P-TIMES)- Kadib markii maxkamadda ICJ ay ku dhawaaqday galabnimadii shalay ahayd in go’aamisay in dhagaysiga dacwada badda ee u dhaxaysa Somalia iyo Kenya laga dhigo June 8-12 ee sanadka 2020 isla markaasna go’aankeeda ku cadaysay inay filayso in labada wadan u yimaadaan dhigaysiga maxkamadda ayaa waxaa go’aankani ka hadlay qaar kamid ah sharci yaqaanada Soomaaliyeed.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda aqbashay go’aanka kasoo baxay maxkamadda, waxaana arintaasi soo dhoweeyey Ra’iisal wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho.
Hadaba sharci yaqaan Saalim Siciid Saalim oo hore u soo noqday hormuudka kulliyada sharciyada iyo qaanuunka ee Jaamacadda PSU sidoo kalena la taliye sare kasoo noqday dhanka sharciga wasaaradda Cadaaladda Puntland ayaa sheegay in dibu dhigida dacwada badda ee Somalia iyo Kenya ay kamid tahay sharciyada u yaala maxkamadda isla markaasna hadii codsi kasoo yeedho mid kamid ah dalalka isku haya wax loo tixgalin karo midkood cabashadiisa hadii uu codsado in dib loogu dhigo dacwada.
Sharci yaqaan Saalim Siciid Saalim ayaa xusay in marar kala duwan Kenya ay u jeedisay maxkamadda ICJ in dib loogu dhigo dacwada la xidhiidha badda taas badalkeeda xilal kala duwan ay qaadatay dacwadaasi dibna loo dhigi doonin mar kale.
Kenya ayuu sheegay in ay duuq daraynayso dacwada badda balse hadii doorasho dalka ka dhacdo ay macquul tahay in ay heshiis hoose la gasho xubno dambe ee iman doona marka la gaadho xiliga doorashada Soomaaliya.
Saalim ayaa sheegay in ay adag tahay in madaxweyne Farmaajo uu heshiis ka galo dacwada badda Soomaaliya, isagoona sheegay in wax walba oo dadaal ah uu ku bixin doono in Somalia aysan ka tanaasulin badeeda.